फ्ल्याट चेस्टेड सेक्स डॉलले साना बुब लव गुडाहरू अनलाइन खरीद गर्नुहोस् - Urdolls
सुपर सपाट स्तन स्तन सेक्स गुड़िया सस्तो मूल्य किन्नुहोस्
त्यहाँ धेरै प्रकारका यथार्थवादी पुतलीहरू छन्। के तपाईलाई सानो एशियाई फ्लैट छाती ठूलो गधा केटी मनपर्छ? कुनै समस्या छैन, निस्सन्देह, यस प्रकारको लागि धेरै विकल्पहरू छन्। तपाईंले सबै फेला पार्नुहुनेछ समतल छाती सेक्स गुड़िया बकवास तपाईं हरेक स्वाद र बजेट को लागी कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं फ्लैट पाउन सक्नुहुन्छ जापानी सेक्स पुतली यहाँ। यो कहिल्यै एक वास्तविक महिला जस्तो हुनेछैन जसले तपाईलाई विरोध गर्छ वा दीर्घकालीन इच्छा व्यक्त गर्दछ। र उसलाई हस्तमैथुनको लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिँदैन। उनी तपाईसँग टेबलमा र टिभीको अगाडि पनि बस्न सक्छिन्। तपाईं फ्लैट चेस्ट एनिम पोर्न सँगै हेर्न सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ धेरै पुरुषहरू छन् जो वास्तविक साहसिक अनुभव गर्न चाहन्छन् सेक्स पुतली फ्लैट छाती संग। तिनीहरूले यहाँ यथार्थवादी मोडेलहरू छनौट गरे। एकै समयमा, हामी सधैं नयाँ फेसन प्रवृत्ति फ्लैट खोज्दै हुनुहुन्छ सानो फ्ल्याट छाती सेक्स पुतली मन पर्छ ताकि तपाईं सामान मा स्थिर वृद्धि प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। गुणस्तर अनुसार, यौन पुतली वास्तवमा एक वास्तविक महिला जस्तै महसुस गर्दछ, त्यसैले यसले पुरुषहरूको आवश्यकताहरू राम्रोसँग पूरा गर्न सक्छ। यदि तपाईं अप्रासंगिक हुन चाहानुहुन्छ तर प्रेमसँग बाँच्न चाहनुहुन्छ भने, यो अन्तिम समाधान हो। यसको अचम्मको प्रामाणिकताको कारण, यो प्राय: फोटोहरूको लागि मोडेलको रूपमा र मोडेलको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। सेक्स डल जस्तै जीवनको विविधता सानो समतल छाती जस्तै प्रभावशाली छ वास्तविक पुतली.
हामीले जानाजानी ए सपाट छाती tpe पुतली पार्टी। के तपाईलाई सानो स्तन सेक्स डल आकर्षक छ? यस भव्य पार्टीमा, धेरै साना लोली र सानो छाती पुतली पार्टीमा सबैभन्दा सुन्दर पोशाक लगाउनुहोस्। तिनीहरूको आफ्नै काम र व्यक्तित्व छ, तर पछिल्लो समाचार अनुसार, तिनीहरू एकल महिला हुन्, मानौं तिनीहरू आफ्नो मनपर्ने नर्तकहरू खोज्दै छन्, के तपाईं तयार हुनुहुन्छ? यो पार्टी एकल वा एक्लो महसुस गर्ने व्यक्तिहरूको लागि उपयुक्त छ। यहाँ धेरै मानिसहरूले घरको न्यानोपन पाएका छन्। आउनुहोस् यो रोमाञ्चक संसारमा सामेल हुनुहोस् र तपाइँ यसलाई पछुताउनु पर्दैन।
अकिरा - पाइपर नन-डिटेच गर्न सकिने हेड TPE जापानी एनिमे सेक्स डल EVO संस्करण 150cm
$ 2,312.67 $ 2,312.67
गुड़ियाघर १168 कालो ठूलो आँखाहरु १५156 सेमी सासा जापानी प्रेम पुतली EVO संस्करण TPE
चेरी सानो माउथ वयस्क साथी अमेलिया हेन्ली शुद्ध लजालु १ 163 सेमी टीपीई सेक्स डल
Muzi फ्ल्याट छाती TPE COSDOLL 155 सेमी नम्बर 161 हेड अद्वितीय स्वाद वास्तविक पुतली
यूरोपीयन शैली लामो हेयर बी कप टीपीई सेक्स डल १148C सीएम एस्ट्रिड जेन
हरियो आई पिशाच TPE Doll मार्टिना वालपोल १158CM सानो स्तनहरू सेक्सी रेड लिप्स
रिड - १155 सेमी मीठो रोमान्स शुद्ध लवली कोमल छोटो कपाल टीपीई सेक्स डल
क्विलर - १158 सीएम युवा महिला एक्सप्रेस उत्साह फ्लैट चेस्ट टीपीई सेक्स डल
ब्राउन घुमाउरो कपाल क्रिसमस गर्ल १145 सीएम डार्लेन मोरिस इकाई टीपीई सेक्स डल
फ्रेकलेड फेस सेल्ला नोएल स्लिम बॉडी १165 सीएम सानो चेस्ट टीपीई डॉल नीलो आँखा वयस्क साथी
$ 1,707.85 $ 1,707.85
Urdolls सेक्सी फ्लैट Chested महिला सेक्स गुडिया संग्रह
फ्ल्याट चेस्टेड सेक्स डलका विशेषताहरू के हुन्?
फ्ल्याट छाती सेक्स पुतली, नामले सुझाव दिन्छ, त्यो, अपेक्षाकृत सपाट छाती सेक्स पुतली, ठूलो छाती सेक्स पुतली देखि अलग। तिनीहरूलाई सानो छाती सेक्स डल पनि भनिन्छ। फ्ल्याट छाती भएको सेक्स पुतली सानो छ, उनको शरीर अधिक लचिलो छ र सजिलै संग तपाइँको उत्कृष्ट सेक्स स्थितिमा जान सक्छ। उसले तपाईंको विभिन्न यौन आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छ। उनी सेक्सी र आकर्षक छिन्, महिला आकर्षणले भरिएको छ, र उनको नाजुक समतल छाती युवा र जीवन शक्तिको प्रतीक हो।
किन मानिसहरू फ्ल्याट छाती प्रेम पुतली माया गर्छन्?
यो युगमा जब लोर्डोसिस र ब्याक कर्ल मुख्यधारा सौन्दर्यशास्त्र हो, धेरै मानिसहरू सोच्छन् BBW सेक्स डल धेरै लोकप्रिय छन्, तर केहि मानिसहरूका लागि, फ्ल्याट छातीको सेक्स डल उनीहरूको मनपर्ने हुन सक्छ। सोध्ने स्वतन्त्रता लिनुहोस्, के तिमीलाई आफ्नो पहिलो प्रेम याद छ? धेरै युवा पुरुषहरूको पहिलो प्रेम फ्ल्याट छाती हुन सक्छ, त्यसैले फ्ल्याट छाती सेक्स डलले उनीहरूको पहिलो प्रेम अनुभवको सम्झना जगाउन सक्छ।
सेक्स डलसँग यौनसम्बन्ध, समतल छाती भएका महिलाहरू प्रायः पातलो हुन्छन्, पातलो कम्मर र पातलो खुट्टाहरू फ्ल्याट-चेस्टेडले ल्याएको थप मूल्य हो, र यी पुरुषहरूको खोज र इच्छा पनि हुन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, सानो मनपर्दो पुतली प्रायः पातलो तर सेक्सी, हल्का, र सार्न सजिलो हुन्छ। को सेक्सी र सुन्दर फिगर सपाट छाती प्रेम पुतली अनगिन्ती पुरुषहरूलाई मोहित पार्नेछ! तपाई अझै के को बारे मा हिचकिचाईरहनु भएको छ? यी वास्तविक पुतलीले अन्य सेक्सी विशेषताहरु र क्षेत्रहरु लाई जोड दिंदा कम से कम महिला को रूप मा चित्रण गर्दछ। राम्रो संग निगरानी र मोहित को लागी, सानो स्तन सेक्स पुतली उपलब्ध छ।